MRTV သတငျးအစီအစဉျကနေ အစောဆုံး CDM လုပျပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျးခဲ့တဲ့ ဦးကြျောသကျလငျးရဲ့လကျရှိအခွအေနေ – Maythadin
May Thadin | November 12, 2021 | News | No Comments
MRTV ကအစောဆုံး CDMလုပျခဲ့တဲ့ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကြျောသကျလငျး၊ ပုံ(၁) ယခငျတာဝနျထမျးဆောငျစဉျကပုံ၊ ပုံ(၂) ယနေ့ဦးကြျောသကျလငျး၊ လှတျမွောကျနယျမွရေောကျရှိနတေဲ့ MRTV မှသတငျးကွငွောသူကိုကြျောသကျလငျးတောထဲဝငျယူနီဖောငျးလေး ဝတျသနတျလေးကိုငျပွီးဓာတျပုံရိုကျပွရငျအဆငျပွမေလား၊ ကနြျောfb accလေးပွနျရပွီးမိတျဆှတှေကေိုလိုကျကွညျ့မိတယျ။
အမြားအားဖွငျ့တော့အရငျအတိုငျးပါပဲ။ ကနြျောလား.?၊ ကိုဗဈငှကျဖြ.ား တုတျေ.ကှးအားလုံး ထိပွီးလှနျမွောကျခဲ့ပါပွီ။ကိုယျရောစိတျပါ ကနျြးမာလကျြပါ။မီးစိမျးလေးမလ.ငျးပွနျမလာပွနျမဆုံတော့တဲ့မိတျဆှတှေအေတှကျစိတျမကော.ငျးကွီးစှာဖွဈမိပါတယျ။မွို့ပွမှာစိတျရောကိုယျပါဒု.က်ခရောကျနကွေသူတှအေတှကျလညျးစိတျထိခိုကျရပါတယျ။
စိတျပူနကွေသူတှအေားလုံးကိုလညျးကြေးဇူးတငျစှာ နှုတျခှနျးဆကျပါတယျ။ မွနျမာပွညျကွီးလဲ အမွနျဆုံးငွိမျးခမျြးပွီးဖတျရှု့ပေးကွတဲ့ မွနျမာပွညျသူ/သားမြားအားလုံးအာဏာရှငျလကျအောကျကနေ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ။
MRTV ကအစောဆုံး CDMလုပျခဲ့တဲ့ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကြျောသကျလငျး၊ ပုံ(၁) ယခငျတာဝနျထမျးဆောငျစဉျကပုံ၊ ပုံ(၂) ယနေ့ဦးကြျောသကျလငျး၊ လှတျမွောကျနယျမွရေောကျရှိနတေဲ့ MRTV မှသတငျးကွငွောသူကိုကြျောသကျလငျးတောထဲဝငျယူနီဖောငျးလေး ဝတျ​သနတျလေးကိုငျပွီးဓာတျပုံရိုကျပွရငျအဆငျပွမေလား၊ ကနြျောfb accလေးပွနျရပွီးမိတျဆှတှေကေိုလိုကျကွညျ့မိတယျ။
အမြားအားဖွငျ့တော့အရငျအတိုငျးပါပဲ။ ကနြျောလား.?၊ ကိုဗဈငှကျဖြ.ား တုတျေ.ကှးအားလုံး ထိပွီးလှနျမွောကျခဲ့ပါပွီ။ကိုယျရောစိတျပါ ကနျြးမာလကျြပါ။မီးစိမျးလေးမလ.ငျးပွနျမလာပွနျမဆုံတော့တဲ့မိတျဆှတှေအေတှကျစိတျမကော.ငျးကွီးစှာဖွဈမိပါတယျ။မွို့ပွမှာစိတျရောကိုယျပါဒု.က်ခရောကျနကွေသူတှအေတှကျလညျးစိတျထိခိုကျရပါတယျ။
စိတျပူနကွေသူတှအေားလုံးကိုလညျးကြေးဇူးတငျစှာ နှုတျခှနျးဆကျပါတယျ။ မွနျမာပွညျကွီးလဲ အမွနျဆုံးငွိမျးခမျြးပွီးဖတျ​ရှု့​ပေးကွတဲ့ မွနျမာပွညျသူ/သားမြားအားလုံးအာဏာရှငျလကျအောကျက​နေ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျကွပါစလေို့ဆုတောငျး​ပေးလိုကျရပါတယျ။
MRTV ကအစောဆုံး CDMလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်သက်လင်း၊ ပုံ(၁) ယခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကပုံ၊ ပုံ(၂) ယနေ့ဦးကျော်သက်လင်း၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေတဲ့ MRTV မှသတင်းကြေငြာသူကိုကျော်သက်လင်းတောထဲဝင်ယူနီဖောင်းလေး ဝတ်သနတ်လေးကိုင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြရင်အဆင်ပြေမလား၊ ကျနော်fb accလေးပြန်ရပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုလိုက်ကြည့်မိတယ်။
အများအားဖြင့်တော့အရင်အတိုင်းပါပဲ။ ကျနော်လား.?၊ ကိုဗစ်ငှက်ဖျ.ား တုတ်ေ.ကွးအားလုံး ထိပြီးလွန်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာလျက်ပါ။မီးစိမ်းလေးမလ.င်းပြန်မလာပြန်မဆုံတော့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်စိတ်မကော.င်းကြီးစွာဖြစ်မိပါတယ်။မြို့ပြမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါဒု.က္ခရောက်နေကြသူတွေအတွက်လည်းစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။
စိတ်ပူနေကြသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စွာ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးအာဏာရှင်လက်အောက်ကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
MRTV ကအစောဆုံး CDMလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်သက်လင်း၊ ပုံ(၁) ယခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကပုံ၊ ပုံ(၂) ယနေ့ဦးကျော်သက်လင်း၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေတဲ့ MRTV မှသတင်းကြေငြာသူကိုကျော်သက်လင်းတောထဲဝင်ယူနီဖောင်းလေး ဝတ်​သနတ်လေးကိုင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြရင်အဆင်ပြေမလား၊ ကျနော်fb accလေးပြန်ရပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုလိုက်ကြည့်မိတယ်။
အများအားဖြင့်တော့အရင်အတိုင်းပါပဲ။ ကျနော်လား.?၊ ကိုဗစ်ငှက်ဖျ.ား တုတ်ေ.ကွးအားလုံး ထိပြီးလွန်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာလျက်ပါ။မီးစိမ်းလေးမလ.င်းပြန်မလာပြန်မဆုံတော့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်စိတ်မကော.င်းကြီးစွာဖြစ်မိပါတယ်။မြို့ပြမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါဒု.က္ခရောက်နေကြသူတွေအတွက်လည်းစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။
စိတ်ပူနေကြသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စွာ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်​ရှု့​ပေးကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးအာဏာရှင်လက်အောက်က​နေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်း​ပေးလိုက်ရပါတယ်။